वयस्क शिक्षा - कसरी स्कूल फर्केर जान | शरणार्थी केन्द्र अनलाइन | शरणार्थी केन्द्र अनलाइन
तपाईं आफ्नो शिक्षा पूरा गर्न चाहनुहुन्छ? नयाँ काम को लागि तालिम वा आफ्नो कौशल सुधार? विश्वविद्यालय जाने वा अंग्रेजी सिक्न? पत्ता तपाईं वयस्क शिक्षा अनलाइन वा आफ्नो समुदायमा प्राप्त गर्न सक्छन् कसरी.
वयस्क शिक्षा अन्य नाम हुन् जारी शिक्षा, उच्च शिक्षा, र आजीवन सिक्ने. यी सर्तहरू सबै वयस्क सिक्न सक्छौं तरिका बारे छन्. वयस्क शिक्षा विभिन्न प्रकारका बारेमा थप जान्न.
आधारभूत प्रौढ शिक्षा - पढाइ र लेखन
पनि एक वयस्क रूपमा, पढ्न र लेख्न सिक्न सक्छौं. यो एक वर्ग वा अभिभावक संग सिक्न सजिलो छ (एक-गर्न-एक शिक्षक). त्यहाँ वयस्क जान सक्नुहुन्छ थुप्रै ठाउँमा पाठ पढ्न र लेख्न को लागि हो. धेरै सामुदायिक कलेजहरु र पुस्तकालयहरु पढाइ र लेखन सिकाउनु वयस्क शिक्षा केन्द्र छ.
पढ्न र लेख्न सिक्न
आफ्नो राज्य मा पुस्तकालयहरु फेला
धेरै समुदाय दिन वा साँझ अंग्रेजी कक्षाहरू छ. तपाईं पुस्तकालयहरु तिनीहरूलाई पाउनुहुनेछ, सामुदायिक केन्द्र, र कलेजहरु मा वयस्क शिक्षा केन्द्र मा. कठिन छ भने तपाईं एक वर्ग प्राप्त गर्न को लागि, अनलाइन सिक्ने सुरु. तपाईं सिक्न मदत गर्न धेरै मुक्त कक्षाहरू छन्.
एक समुदाय कलेज फेला
वयस्कहरूको लागि उच्च विद्यालय डिप्लोमा
संयुक्त राज्य अमेरिका वयस्क मा एक GED प्राप्त गर्न सक्छन्®, HiSET वा TASC उपाधि एक उच्च विद्यालय शिक्षा प्रतिस्थापन गर्न. तपाईं परीक्षण को लागि अध्ययन गर्न हुनेछ, तर यो उच्च विद्यालय भन्दा धेरै तेज छ. तपाईंको स्थानीय कलेज वा पुस्तकालय मा दिन वा साँझ कक्षाहरू छन्. वा तपाईं हाम्रो निःशुल्क अनलाइन GED लाग्न सक्छ® धेरै भाषामा तयारी कक्षा.
निःशुल्क अनलाइन GED® वर्ग
काम प्रशिक्षण र काम कौशल
जब तपाईं एक काम खोज्न, तपाईं आधारभूत काम कौशल हुन सक्छ. तपाईं एक कम्प्युटर कसरी प्रयोग गर्न सिक्न आवश्यक पर्दछ. या शायद तपाईं एक विशिष्ट काम को लागि तालिम गर्न चाहनुहुन्छ, जस्तै खाद्य उद्योग मा काम रूपमा. तपाईं काम केन्द्र मा काम प्रशिक्षण सबै प्रकारका पाउन सक्नुहुन्छ, resettlement एजेन्सीहरू, सामुदायिक कलेजहरु, र स्थानीय संगठनहरूको.
काम प्रशिक्षण कार्यक्रम कसरी पाउन र काम को लागि सीप प्राप्त गर्न
उच्च शिक्षा उच्च स्कूल पछि शिक्षा मतलब. उच्च शिक्षा सामान्यतया कलेज वा विश्वविद्यालय मा हुन्छ. संयुक्त राज्य अमेरिका मा कलेज सबै प्रकार को दुई वर्ष पाठ्यक्रम प्रस्ताव. तिनीहरूलाई थुप्रै तपाईं एक क्यारियर लागि तयार. विश्वविद्यालयहरु चार वर्ष वा अब पाठ्यक्रम प्रस्ताव. तपाईं विश्वविद्यालय देखि स्नातक भने, तपाईं को लागि जब एक डिग्री आवश्यक लागू गर्न सक्नुहुन्छ. तपाईं पनि अनलाइन उच्च शिक्षा कक्षाहरू लिन सक्छ.
अनलाइन पाठ्यक्रम र डिग्री Coursera संग
को RCO स्रोत अन्वेषक तपाईंलाई आवश्यक वयस्क शिक्षा पाउन मदत गर्न प्रयोग गर्नुहोस् तपाईंको शहर.
Please use the RCO resource finder to help you find the adult education you need In Your City.